Ungayithatha kanjani iDijithali > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Tsifran ST, amaphilisi ama-500 mg ama-600 mg, ama-10 ama-pcs
I-"Tsifran" imiselwe lezi zifo ezilandelayo: ukutheleleka kohlelo lwe-genitourinary (i-pyelonephritis engamahlalakhona kanye ne-acute, cystitis, i-prostatitis, i-epididymitis). , i-urethritis, ukutheleleka kwezitho ze-ENT (imidiya ye-otitis ephakathi neyangaphandle, i-sinusitis, mastoiditis), izifo zesikhumba nezicubu ezithambile (ukushiswa, amanxeba, izilonda ezithelelekile, amathumba), izifo zesisu (i-peritonitis, umkhuhlane we-typhoid, cholangitis) ukhalo ezincane (endometritis, salpingitis), izifo ngisho namalungu amathambo.
Umthamo nesikhathi sokulashwa kwe- "Tsifran" kusethelwa ngudokotela, ngakwelinye nelinye icala, kususelwa ekuxineni kwesifo, kutholakale i-pathogen, iminyaka yesiguli, isisindo somzimba nomsebenzi wezinso. Ezinganeni ezisukela eminyakeni eyi-12 i- “Tsifran” ichazwa inani lansuku zonke le-5-10 mg nge-1 kg yesisindo somzimba, ehlukaniswe ngemithamo emi-2. Amacwecwe kufanele athathwe ngaphambi kokudla. I-Adult "Tsifran" iphathwa kahle ngaphakathi (kancane) ngesimo se-infusions ngenani lama-200 mg izikhathi ezi-2 ngosuku ngezifo zamapheshana okuchama kanye nemikhawulo ephansi. Kwezinye izifo, umuthi uphathwa ngesilinganiso sama-200 mg ngokuphumula kwamahora ayi-12. Uma kwenzeka umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle, umthamo wansuku zonke uncishiswa izikhathi ezi-2. Kwezinye izimo, ngemuva kokuphathwa kwe-iv, baphendukela ekuphatheni umuthi ngomlomo. Ukwelashwa kwezifo ezithathelanayo eziyingozi kwenziwa okungenani izinsuku ezingama-5-7. Ngemuva kokuphela kwezimpawu, inkambo iyelulelwa ezinye izinsuku ezingama-3.
Imiphumela emibi nokuphikisana nokusetshenziswa kwe- "Tsifran"
I-"Tsifran" ingadala imiphumela efana nokulala phansi, ukugabha, isicanucanu, ubuhlungu besisu, ukuqina kwesibindi, ukuqaqamba kwamakhanda, isizungu, isiyezi, ukuqubuka, ukudideka, ukuqina, i-migraine, ukuzamazama komhlaba, ukubuka okufiphele, iphunga, ukunambitheka kwenhliziyo, isigqi senhliziyo , i-eosinophilia, i-leukopenia, i-leukocytosis, i-anemia, i-thrombocytosis, i-hemolytic anemia, umsebenzi owengeziwe we-enzyme yesibindi, i-hyperglycemia, i-hematuria, i-glomerulonephritis, i-dysuria, i-polyuria, ukugcinwa komchamo, ukopha kwe-urethral, ​​myalgia, arthralgia, tendo lokuluhlaza, samathambo, ukudabuka umsipha, nesifo pseudomembranous, candidiasis, ubuthakathaka generalized.
Umuthi uphekelwa umthetho uma kwenzeka kwenzeka kuthathwa njengengxenye yezimpawu zomzimba emzimbeni, ngesikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa, ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12. Ngokunakekelwa okukhethekile, i- "Tsifran" isetshenziswa kubantu abanezibonakaliso ezinzima ze-arteriosclerosis yamakhemikhali, abanezifo zokujikeleza, ukugula kwengqondo, isithuthwane, isifo sokuwa, isifo sokuqina kwesibindi kanye / noma ukwehluleka kwezinso, lapho sebekhulile.
Ithebhulethi engu-1 ehlanganisiwe iqukethe:
izinto ezisebenzayo: ciprofloxacin hydrochloride USP, elingana ne-ciprofloxacin 500 mg, tinidazole BP 600 mg,
ababukeli: i-microcrystalline cellulose, i-colloidal anhydrous silicon, i-magnesium stearate, i-sodium starch glycolate, i-sodium lauryl sulfate. Izithako zesendlalelo sangaphandle samagremu: i-sodium starch glycolate, i-talc ehlanziwe, i-sodium lauryl sulfate, i-microcrystalline cellulose, i-colloidal anhydrous silicon, i-magnesium stearate. Shell: Opadry ophuzi, amanzi ahlanziwe.
I-Tsifran ST ilungiselelo elihlanganisiwe elenzelwe ukwelashwa kwezifo ezixubile ezibangelwa ama-anaerobic kanye nama-aerobic microorganisms, kanye nokutheleleka kwephephana lesisu, ngokwesibonelo, isifo sohudo noma udayi, i-amoebic noma inhlanganisela (i-amoebic ne-bacterial) imvelo. I-Tinidazole iyasebenza ngokulwa nama-anaerobic microorganisms anjengeClostridium Hardile, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Peptococcus kanye nePeptostreptococcus anaerobius. Ama-microorganisms e-Anaerobic abangela ikakhulukazi izifo zamaphakathi wesisu, i-pelvis, amaphaphu, noma izitho zomlomo. Lapho ukutheleleka kwe-anaerobic, imvamisa, kuba nengxube yamagciwane e-anaerobic ne-aerobic. Ngakho-ke, ngokutheleleka okuhlanganisiwe kwe-anaerobic, i-antibiotic esebenza ngokumelene namagciwane we-aerobic yengezwa ekwelashweni.
I-Ciprofloxacin iyi-antibiotic ebanzi ebanzi esebenza ngokulwa namagciwane amancane we-aerobic gram-positive ne-gram-negative njenge-E. coli, Klebsiella spp., S.typhi kanye nezinye izingqinamba zaseSalmonella, P.mirabilis, P.vulgaris, Yersinia Enterocoilitica, Ps.aeruginosa, UShigella flexneri, uShigella sonnei, H.ducreyi, H.influenzae, N..gonorrhoeae, M. catarrhalis, V. cholerae, B. fragilis, Staph.aureus (kufaka phakathi i-methicillin ukumelana), uStaph.epidermidis, Strep.pyogenes, Strep. pneumoniae, Chlamidia, Mycoplasma, Legionella, kanye ne-Mycobacterium isifo sofuba.
Zombili i-ciprofloxacin ne-tinidazole zigxile kahle emgodini wesisu. Ukugcizelela okuphezulu kwengxenye ngayinye kutholakala kungakapheli amahora angu-1 kuye kwayi-2. I-bioavailability ephelele ye-tinidazole ingu-100%, kanti ukubopha amaprotheni nge-plasma kungu-12%. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kungamahora ayi-12-14. Umuthi ungena ngokushesha kwezicubu zomzimba, ufinyelela ukugxila okuphezulu lapho. I-Tinidazole ingena ku-cerebrospinal fluid endaweni yokuhlangana elingana ne-plasma yayo futhi ifakwa ekubuyiselweni okubuyela esimweni se-renal tubules. I-Tinidazole isuswe ku-bile ekugxilweni okuncane ngaphansi kwama-50% okuhlushwa kuyo ku-plasma. Cishe i-25% yomthamo othathwe udaluliwe ungashintshiwe emchameni.
Ama-Metabolites akha i-12% yomthamo olungiselelwe futhi abuye akhishwe kumchamo. Kanye nalokhu, kukhona ukumbiwa okuncane kwe-tinidazole enezinduku.
I-Ciprofloxacin ingena kahle ngemuva kokuphathwa ngomlomo. I-bioavailability ye-ciprofloxacin icishe ibe ngama-70%. Lapho kuhlanganiswa nokudla, ukumuncwa kwe-ciprofloxacin kunciphisa. I-20-40% yezidakamizwa ibopha amaprotheni e-plasma. I-Ciprofloxacin ingena kahle emanzini uketshezi nezicubu: amaphaphu, isikhumba, amafutha, izicubu zomzimba ne-cartilage, kanye nezitho zamathambo nezomchamo, kufaka phakathi i-prostate. Umuthi utholakala ngokugxila okuphezulu kumathe, umunyu emgodleni wamakhala nasesibelethweni, isidoda, i-lymph, i-peritoneal fluid, i-bile ne-prostate secretion. I-Ciprofloxacin isetshenziswa ngokwengxenye yisibindi. Cishe u-50% womthamo othathwe udaluliwe ungashintshiwe emchameni, kanye ne-15% ngendlela yama-metabolites asebenzayo, njenge-oxociprofloxacin. Wonke umthamo udonswa ku-bile, ugcotshwe kancane kancane. Cishe i-15-30% ye-ciprofloxacin ikhishwa ezindlini. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kungamahora angama-3.5-4,5. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kungaqhubeka isikhathi eside ngokuhluleka kakhulu kwezifo sezinso nasezigulini esezikhulile.
I-Tsifran ST ikhonjiswa ekwelashweni kwezifo ezilandelayo:
Ukwelashwa kwezifo ezixubile okubangelwa ama-anaerobic abucayi kanye nama-microorganis we-aerobic: i-sinusitis engapheli, isifo sokuqina kwamaphaphu, i-empyema, izifo ezithinta isisu, izifo ezihlasela ukuvuvukala kolwelwesi, ukutheleleka kwe-postoperative ngokubakhona kwe-aerobic kanye ne-anaerobic bacteria, izilonda zesifo sikashukela kanye nezicubu ezithambile, izilonda zesifo sikashukela. unyawo ”, izilonda zokucindezela, izifo zomgogodla womlomo (kufaka phakathi i-peridontitis ne-periostitis).
Ukwelashwa kwesifo sohudo noma ukonakala kwe-amoebic noma i-etiology ehlanganisiwe (i-amoebic ne-bacterial).
Ukusetshenziswa kweCyfran CT ngesikhathi sokukhulelwa akunconywa. I-Tinidazole ingaba nomphumela we-carcinogenic ne-mutagenic. I-Ciprofloxacin yeqa isithiyo se-hematoplacental. Ukusetshenziswa kwe-tsifran ST kuyaphikiswa ngesikhathi sokuncelisa ibele. Ama-Tinidazole ne-ciprofloxacin adalulwa ubisi lwebele. Ngakho-ke, ngesikhathi sokuqunjelwa, uma kudingeka ukusebenzisa i-Tsifran ST, ukuncelisa ibele kufanele kumiswe.
I-Cifran ST icutshaniswe neziguli ezine-hypersensitivity (allergy) kunoma yikuphi okususelwa ku-fluoroquinolone noma imidazole.
I-Tsifran ST iphinde ihlukaniswe neziguli ezinomlando wezifo ze-hematologic. Ngokuvinjelwa kwethambo le-hematopoiesis yamathambo, i-porphyria eyingozi.
I-Tsifran ST i-contraindication ezigulini ezinezilonda ze-organic neurological.
I-Tsifran ST i-contraindication ezigulini ezinobuntwana (kuze kube yiminyaka eyi-18).
Umuthi kufanele usetshenziswe ngokuqapha ezigulini ezinesifo esibuthakathaka sokuqina kwemithambo ye-cerebral, nezingozi ze-cerebrovascular, ngokugula kwengqondo, isithuthwane, ne-epileptic syndrome, ukuqina kwesihlungu kanye / noma ukwehluleka kwesibindi.
Lapho usebenzisa umuthi kubantu asebekhulile, azikho izinkinga ezinkulu eziphawuliwe. Kodwa-ke, ezigulini esezikhulile, ukwehla okuhambisana nobudala emsebenzini wezinso kungenzeka, ngakho-ke kufanele kuqashelwe lapho kusetshenziswa umuthi ezigulini ezinjalo.
Ukusuka ohlelweni lokugaya ukudla: ukuncipha kokudla okunciphile, ukunambitheka komlomo owomile, ukunambitheka komoya, isicanucanu, i-cholestatic jaundice (ikakhulukazi ezigulini ezinezifo zesibindi ezedlule), i-hepatitis, hepatonecrosis.
Ukusuka ohlelweni lwezinzwa: ikhanda, isiyezi, ukukhathala okwandisiwe, ukuhlangana kokuhamba kokungasebenzi kahle (kufaka phakathi i-locomotor ataxia), i-dysarthria, i-peropheral neuropathy, ukugcwala okungatheni, ubuthakathaka, ukwethuka, ukuqwasha, ukukhuphuka kokujuluka, ukukhuphuka kwengcindezi yangaphakathi, ukudideka, ukucindezelwa, ukucatshangelwa kwemizwa, kanye nezinye izinkomba zokuphendula kwengqondo, i-migraine, ukukhubazeka, i-artery thrombosis.
Engxenyeni yezitho zemizwa, ukunambitheka okungahambi kahle nephunga, umbono ongaboni kahle (diplopia, ushintsho kumbono wombala), i-tinnitus, ukulahleka kwezindlebe.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo: tachycardia, arrhythmias yenhliziyo, kwehle umfutho wegazi.
Ukusuka ohlelweni lwe-hematopoietic: i-leukopenia, i-granulocytopenia, i-anemia, i-thrombocytopenia, i-leukocytosis, i-thrombocytosis, i-hemolytic anemia
Engxenyeni yezinkomba zaselabhorethri: hypoprothrombinemia, umsebenzi owandayo we- "transaminases wesibindi" ne-alkaline phosphatase, hypercreatininemia, hyperbilirubinemia, hyperglycemia
Ukusuka ohlelweni lomchamo: i-hematuria, i-crystalluria (umchamo we-alkaline kanye nokuphuma komchamo ophansi), i-glomerulonephritis, i-dysuria, i-polyuria, ukugcinwa komchamo, kwehlise umsebenzi we-excretory wezinso, i-nephritis yangaphakathi.
Ukusabela okwenziwa yi-allergic: ukulunywa, okhalweni, ukwakheka kwamacembe okuhambisana nokopha, kanye nokuvela kwamaqhubu amancane abumba amabala, imishanguzo yezidakamizwa, ukuqubuka kwesikhumba esikhunjeni (petechiae), ukuvuvukala kobuso noma i-larynx, ukuphefumula komoya, i-eosinophilia, ukwanda kwezithombe, i-vasculitis, i-nodular i-erythema multiforme exudative (kufaka phakathi iStevens-Johnson syndrome), ubuthi be-necyolal necrolysis enobuthi (isifo sikaLyell).
Umphumela: i-arthralgia, isifo samathambo, i-tendovaginitis, ukuqhuma kwe-tendon, i-asthenia, i-myalgia, i-superinfection (i-candidiasis, i-pseudomembranous colitis), ukufiphala kobuso.
Ithuthukisa umphumela we-anticoagulants engaqondile (ukunciphisa ingozi yokopha, umthamo wehliswa ngo-50%) kanye nesenzo se-ethanol (disulfiram-like reaction).
Ihambisana ne-sulfonamides kanye nama-antibal (ama-aminoglycosides, erythromycin, rifampicin, cephalosporins).
Akunconywa ukunquma nge-ethionamide.
I-Phenobarbital isheshisa imetabolism.
Ngenxa yokwehla komsebenzi wezinqubo ezi-oxidation ze-microsomal oxidation kuma-hepatocytes, kwandisa ukuqina futhi kunwebisa impilo yengxenye ye-theophylline (namanye ama-xanthine, ngokwesibonelo i-caffeine) yemithi yomlomo ye-hypoglycemic (PM), i-anticoagulants engaqondile, futhi kusiza ukunciphisa inkomba ye-prothrombin.
Lapho kuhlanganiswa nezinye izidakamizwa ze-antimicrobial (ama-beta-lactam antibiotic, aminoglycosides, clindamycin, metronidazole), i-synergism imvamisa ibonwa.
Igqamisa umphumela we-nephrotoxic we-cyclosporrin, ukwanda kwe-serum creatinine kuyaphawulwa, ezigulini ezinjalo, le nkomba idinga ukubhekelwa izikhathi ezi-2 ngesonto
Ngasikhathi sinye, kuthuthukisa umphumela we-anticoagulants engaqondile.
Ukuphathwa komlomo kanye ne-Fe equkethe izidakamizwa, i-sucralfate ne-antacid drug equkethe i-Mg2 +, i-Ca2 +, i-A13 + kuholela ekunciphisweni kokufakwa kwe-ciprofloxacin, ngakho-ke kufanele kunqunywe emahoreni angama-1-2 ngaphambi noma amahora ama-4 ngemuva kokuthatha izidakamizwa ezingenhla.
Izidakamizwa ezingezona ezokwehlisa ukuvuvukala (ngaphandle kwe-acetylsalicylic acid) zandisa ingozi yokubanjwa.
I-Didanosine inciphisa ukumuncwa kwe-ciprofloxacin ngenxa yokwakheka kwezakhiwo zayo nayo, equkethe i-Mg2 +, A13 + equkethwe kwi-didanosine.
I-Metoclopramide isheshisa ukumuncwa, okuholela ekuncipheni kwesikhathi sokufinyelela ekugxileni kwayo okuphezulu.
Ukulawulwa ngokubambisana kwezidakamizwa ze-uricosuric kuholela ekunciphiseni kokuqothula (kuze kufike ku-50%) kanye nokwanda kokuhlungwa kwe-plasma ye-ciprofloxacin.
Asikho i-antidote ethize, Ngakho-ke, ukwelashwa okunezidakamizwa ezingeqile zeCyfran CT kufanele kube nezimpawu futhi kufake lezi zinyathelo ezilandelayo:
- Khombisa ukuhlanza noma ukuhlanza esiswini.
- Ukuthatha izinyathelo ze-hydrate eyanele yomzimba (ukwelashwa kokufakwa).
- Ukunakekelwa okuxhasayo.
Kunconywe ukugwema ukuboniswa ngokweqile emisebeni yelanga ngesikhathi sokulashwa nge-Cifran ST, ngoba ezinye iziguli eziphathwe nge-fluoroquinolones zazine-Phototoxicity reaction. Uma kwenzeka ukusabela kwe-Phototoxicity, yeka ukusetshenziswa kwesidakamizwa ngokushesha.
Lapho usebenzisa i-tinidazole, kungenzeka (kepha akuvamile) ukuthuthukisa i-urticaria ejwayelekile, ukuvuvukala kobuso kanye ne-larynx, ukwehlisa umfutho wegazi, i-bronchospasm kanye ne-dyspnea. Uma isiguli singadabuki kunoma yikuphi okususelwa ku-imidazole, khona-ke ukuzwela kwesiphambano kungakhula kube yi-tinidazole, ukuthuthukiswa kokuphendula kwesiphambano kwe-ciprofloxacin kungenzeka futhi nasezigulini zigulane nokunye okususelwa kwezinye i-fluoroquinolone. Ngakho-ke, uma isiguli sineminye imiphumela yokungezwani nezidakamizwa ezifanayo, kungenzeka ukuthi kubhekwe ukusabela kwe-cross-allergic kuCyfran ST.
Ngokusetshenziswa kwe-tinidazole ehlanganiswe notshwala, ama-crumb asesiswini abuhlungu, isicanucanu kanye nokuhlanza kungenzeka. Ngakho-ke, ukusetshenziswa okuhlangene kwe-Cifran ST notshwala kuyaphikiswa.
Ukuze ugweme ukuthuthukiswa kwekristalu, umthamo wansuku zonke onconyiwe akufanele udlulwe, ukuphuza okwanele koketshezi kanye nokugcinwa kokuphendula komchamo we-acid nakho kuyadingeka. Kubangela ukugcwala okumnyama komchamo.
Ngesikhathi sokulashwa, kufanele wenqabe ukuhlanganyela emisebenzini engaba yingozi edinga ukunakwa okwandisiwe nesivinini sokuphendula kwengqondo nemoto.
Iziguli ezinesifo sokuwa, umlando wokuxhuzula, izifo zezifo zomzimba kanye nokulimala kobuchopho, ngenxa yengozi yokuvela okubi kusuka ohlelweni lwezinzwa oluphakathi, umuthi kufanele unikezwe izinkomba "ezibalulekile" kuphela.
Uma isifo sohudo esinzima futhi isikhathi eside senzeka phakathi noma ngemuva kokwelashwa, ukuxilongwa kwe-pseudomembranous colitis kufanele kungafakwa ngaphandle, okudinga ukuhoxiswa ngokushesha komuthi kanye nokuqokwa kokwelashwa okufanele.
Ngokubonakala kobuhlungu emithanjeni noma ekuqaleni kwezimpawu zokuqala ze-tenosynovitis, ukwelashwa kufanele kuyekwe.
Ngesikhathi sokwelashwa, isithombe segazi le-peripheral kufanele sibhekwe.
Ukuphepha kanye nokusebenza ngempumelelo ekwelashweni nasekuvinjelweni kwezifo ze-anaerobic ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-12 akukasungulwa.
Amathebulethi embozwe ngefilimu, 500 mg
into esebenzayo - ciprofloxacin hydrochloride 582.37 mg (okulingana ne-ciprofloxacin) 500.00 mg
ababukeli: i-microcrystalline cellulose (Avicel PH101), isitashi sommbila, isitashi sommbila (ngokufaka i-gluing), i-magnesium stearate, talc, i-colloidal silloon dioxide, i-sodium starch glycolate (uhlobo A), amanzi ahlanziwe
Igobolondo: Amanzi ahlanziwe, opadry OY-S-58910 mhlophe (hypromellose E464, titanium dioxide E171, polyethylene glycol 400, talc E553
Amacwecwe enziwe ngemidwebo kaCapsule enziwe nge-film coating esuka emhlophe iya cishe emhlophe, aqoshwe ngo- "500" ngakolunye uhlangothi futhi abushelelezi ngakolunye uhlangothi.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, i-ciprofloxacin ingena ngokushesha kusuka ezingxenyeni ezingaphezulu zesibeletho esincane, ifinyelela ekujuleni okukhulu kwe-serum (Cmax) ngemuva kwemizuzu engama-60-90. Ukudla akulithinti izinga lokufakwa komuthi emzimbeni. Ngemuva kokuthatha umthamo owodwa we-250 mg no-500 mg, i-Cmax ingu-0.8-2.0 mg / L no-1.5-2.9 mg / L, ngokulandelana. I-bioavailability eyi-70-80%. I-Cmax inokuxhomekeka okuqondile komthamo othathwe.
Umthamo wokusatshalaliswa kwe-ciprofloxacin ngu-2-3 l / kg, oqinisekisa ukusatshalaliswa okufanayo kwezitho nezicubu. Njengoba izinga lokubopha kumaprotheni e-plasma lingama-20-30% kanti iningi lomuthi wethulwa ku-plasma kwifomu engeyona i-ionized, cishe lonke ithamo elithathwe kwifomu elingavunyelwe lisatshalaliswa esikhaleni esengeziwe se-vascular.
It is eyenziwe ngesibindi. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kwenza amahora angama-3-5. Ngokuvamisile kucishwe kungashintshiwe emchameni, ngokwengxenye yama-metabolites. Cishe i-10% - ikhishwa ngamathumbu, cishe i-1% ye-ciprofloxacin ikhishwa ku-bile.
Ama-Pharmacokinetics emaqenjini akhethekile eziguli. Imiphumela yezifundo ze-pharmacokinetic ze-ciprofloxacin ezigulini esezikhulile zibonisa ukukhulisa okuncane nje kwengxenye yempilo. Lo mehluko kuma-pharmacokinetics awubalulekile ngokomtholampilo..
Ukwehluleka kwangempela Ezigulini ezinokwehla kokusebenza kwe-renal, impilo yengxenye ye-ciprofloxacin yinde kancane. Kwezinye izimo, ukulungiswa komthamo kungadingeka..
Ukwehluleka kwesibindi. Ezifundweni zokuqala ezibandakanya iziguli ezinesibindi se-cirrhosis, azikho izinguquko ezibalulekile kumakhemikhali we-pharmacokinetic of ciprofloxacin. Kodwa-ke, i-pharmacokinetics ye-ciprofloxacin ezigulini ezinokwehluleka kwesibindi okukhulu ayifundiswanga ngokuphelele.
Ukusebenzisana kwezidakamizwa. Endabeni yokuphuza amaphilisi we-ciprofloxacin ngasikhathi sinye nokudla, ukumunca umuthi kwehlisa ijubane, ngenxa yalokho inani eliphakeme kakhulu le-ciprofloxacin egazini lifinyelelwa cishe amahora angama-2, hhayi ngemuva kwehora eli-1. Ngasikhathi sinye, ukumuncwa kwe-ciprofloxacin sekuphelele. Lapho kuhlanganiswa nama-antacid aqukethe i-magnesium noma i-aluminium hydroxide, i-bioavailability ye-ciprofloxacin ingancishiswa ngo-90% .
I-Ciprofloxacin icutshaniswe neziguli ezithola i-tizanidine.
I-Ciprofloxacin inciphisa ukucaciswa kwe-theophylline, okungaholela ekwenyukeni kokuxineka kwe-serum theophylline kanye nengozi eyengeziwe yokuphazamiseka kwesistimu ye-neva ephakathi nezinye izindlela ezingezinhle zokuphendula. I-Ciprofloxacin futhi inciphisa ukucaciswa kwe-caffeine futhi ivimbela ukwakheka kwe-paraxanthin yayo ye-metabolite.
Indlela yokusebenza. Isenzo se-bactericidal se-ciprofloxacin kungenxa yokuvinjwa kwe-enzymes topoisomerase II (i-DNA gyrase) ne-topoisomerase IV, okudingeka ukuphindaphindwa, ukuphrinta, ukulungisa, nokuphinda kwenziwe i-bacterial DNA.
Indlela yokuthuthukiswa kokumelana. Ukumelana neFluoroquinolone kuhambisana kakhulu nokuguqulwa kwezakhi zofuzo ze-DNA gyrase, ukutholakala kokulimazeka kwengqamuzana elingaphandle lamakhemikhali, noma ukusebenza kwamaprotheni ejection, okuholela ekususweni kwe-fluoroquinolones esitokisini. Ezimweni in vitro Ukumelana kwe-ciprofloxacin kuqala ukukhula ngokushintsha kwezakhi eziningi. Izehlakalo zokuphikisana kwe-ciprofloxacin ngenxa yokuguqulwa okuzenzakalelayo okuvame ukuhluka kuye